Domingo Villar. Mharidzo muMadrid yeThe Last Boat. Yake trilogy | Zvazvino Zvinyorwa
Domingo Villar. Mharidzo muMadrid yeThe Last Boat. Yake trilogy
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Zviitiko, Mabhuku, Nhema nhema, dzakawanda
Mifananidzo (c) Mariola DCA.
Muvhuro wapfuura ndaive mu kuratidzwa kwe Ngarava yekupedzisira, iyo nyowani nyowani nemunyori Sunday Villar, kubva kuVigo iri kuMadrid. Yakaitirwa ku Galicia Imba mumoyo weguta guru uye maive Mhedziso izere.
Zvakareruka, kuzvininipisa uye kudarika Nekuda kwekugamuchira kukuru mushure memakore gumi ekumirira bhuku iri, Villar akatipa a hurukuro yakasununguka uye netsitsi dzenyu dzose. Saka panoenda izvi chinyorwa nezvake chiito uye pane imwe ye yakanakisa mhosva inoverengeka trilogies izvo zvandakaverenga.
1 Galicia, Domingo, Leo, Rafa neni
2 Mharidzo yeChikepe chekupedzisira muMadrid - Kurume 25 - Casa de Galicia
2.1 Maitiro ekusika
2.2 Themes, vatambi, zvinokuvaraidza zvemunyori
2.3 Nzvimbo yekuguma
3.1 Meso emvura
3.2 Mhenderekedzo yegungwa
3.3 Ngarava yekupedzisira
Galicia, Domingo, Leo, Rafa neni
Ndiri kuenda kuzororo ku Bueu, kumahombekombe ekumaodzanyemba kwe Pontevedra estuary, muna Chikumi wega wega kweanopfuura makore makumi maviri. Y muchinjikwa Vigo kubva kuCangas kuona zambuko re Rande parutivi uye zviwi Cies imwe yacho ndeyangu imwe yeiyo mafaro makuru yegore rose.
Chaizvoizvo mazuva iwayo kuGalicia anowanzo kuve akanakisa egore. Nekuda kwemamiriro ekunze, chikafu, vanhu uye mumhanzi mune mataurirwo aro nenzvimbo yacho zvakatosiyana nenyika yangu yakaoma uye yakati sandara yekubva. Saka nekufamba kwenguva Kunyangwe ini ndakazvarwa Manchego chizi, ndinonzwawo kunge octopus ku feira.
Neichi chikonzero, rimwe zuva icho chikamu chemoyo wangu chakasvetuka apo, muchitoro chemabhuku uye ndichitarisa ndisingatsvage chero chinhu kunyanya, ndakaona akati wandei mabhuku ane nhema uye chena mabutiro nemazita ekuremekedza. Ndakanhonga imwe uye pabutiro rekumashure ndakaverenga mazita akaita Vigo kana Panxón. Poshi Meso emvura akabatwa aibva kuBueu, uye mu Mhenderekedzo yegungwa chiitiko ichi chakaitika muPanxón, saka Handina kunonoka kutora.
Ipapo ndakasangana nevanyori: Inspector Leo Caldas, yakachengetwa, yakakomba, yemazwi mashoma, kudzikama, yehupenyu hwakaomarara uye hwakatarwa nehukama nababa vake uye kufa kwekutanga kwamai vake. Ane mubatsiri, Rafael Estévez, anobva kuZaragoza, Masendimita makumi masere nemashanu eruoko rwakasimba uye rwakananga, rwekukurumidzira kwakamuisa mumatambudziko anopfuura rimwe uye zvakamupa rudzi rwe kutapwa kuGalicia nebhonasi yakawedzerwa: iyo yekufanirwa kubata zvakare netsumo yechiGalician kusanzwisisika kunowanzo kumusunga.
Ivo vakatora nguva yakareba ini Ndakawira zvakapenga murudo naLeo Caldas uye ndichanamatira mhuka tsvuku yaRafael Estévez nariini, counterpoint yakakwana mumapurisa maviri aya seedu seakasarudzika. Iye zvino ndadya chechitatu futi uye, nenzira, vanga vachiwedzera saizi pamwe nevevaverengi.
Mharidzo ye Ngarava yekupedzisira muMadrid - Kurume 25 - Casa de Galicia
Mukuratidzwa kwerino rondedzero yechitatu, Domingo Villar aikurukura nemutori venhau Susana Santaolalla kweinenge awa. Zvakanyanya kufara uye kunyara Pakutanga, Villar airatidza huviri kunzwa kwe kusatenda uye kusava nechokwadi zvakanyanya kune iyo kugamuchirwa chebhuku mushure menguva yakawandisa nekuti nekuti iyo nguva imwechete yaizove yakarongedzerwa kwariri kukanganwa. Hapana chimwe chinowedzera kubva pachokwadi. Yakanga iri kubudirira pakarepo mukushoropodza pamatanho ese uye mukutengesa.
Villar akatiudza nezvazvo sei zvatora makore gumi kuburitsa iri bhuku rechitatu, iro raive rakanzi zita Matombo anochinjika. Bump yako mumugwagwa, iyo kufa kwababa vake, zvakamuita kuti afunge zvakare zvaakange anyora. Saka ndafunga kutanga patsva. Nekuti sezvo isu isu vanonyora tichiziva mushe, kana mamesi achitora zororo, anozvivharira kana kukuregeredza, unofanirwa kupa nguva. Uye nyaya yega yega ine yayo yega.
Akataura zvakare nezve nzira yekusika, yei zvakaoma uye zvinogumbura Izvo zvinogona kubuda dzimwe nguva. Uye isu tinoziva zvakare nezve izvi. Zvinotora makore gumi kudhirowa uye kuumba zviitiko, nharaunda uye mavara, iwe unoisa patafura manzwiro aunodawo kuratidza muverengi. Uye iwe unoda kuzadzikisa iyo nyaya inoramba yakaiswa mudumbu uye tora, kana kufunga nekusingaperi, protagonists dzayo seshamwari dzavo.
Ndokuzo zvinongotora mazuva mashoma kuti vaverengi vazvimedze. Me hazvina kunditorera vhiki mbiri, uye nekuti ndanga ndichipatsanura nguva dzekuverenga idzo, saka dzaishuvira, kuti zvive zvakanaka uye zvakanyatsogadziriswa, unofanirwa kuenderera hongu kana hongu paunongotanga.
Zvakaitika kune maviri apfuura, saka hazvingagone kuve zvakafanana izvozvi? Uye kanganwa? Kanganwa izvozvo Kunaya Vigo, iro gungwa chiteshi chegore uye gungwa rinotsemuka, idzo kusiyanisa pakati pemadhorobha nekumaruwa? Kanganwa mutsa, kureruka, tsitsi uye kusurukirwa yeanonyungudika Leo Caldas? Kubata uye rudo rwe baba vake? Kune zvisingatsungiririki santiago losada? Kune vanobudirira Clara Barcia? Kuna Commissioner Soto? Kanganwa izvozvo mhuka yemusango naRafa Estévez, iyo imbwa dzese dziri munyika dzinovenga uye idzo zvisingaiti kuti dzisanamate?
Kwete, iwo mavara ese akanyatso kurukwa uye kuratidzwa haakanganwike. As the nhoroondo uye mavara sekondari, uye iyo zvirongwa yakagadzirirwa zvakanaka uye yakarukwa mukati mamiriro sezvakangoita protagonists.
Mufananidzo: (c) Ediciones Siruela pa Twitter.
Themes, vatambi, zvinokuvaraidza zvemunyori
Villar akabvuma izvozvo Ndakapererwa. Asi izvi ndizvo zvinoitika kana zvinhu zvaitwa nemazvo, zvisinei nekuti zvinotora nguva yakareba sei kugadzira. Ehe, zvatakamubvunza ndizvozvo usamirira imwe makore gumi kune inotevera novel. Ini zvirokwazvo ndave kutoda zvimwe.
Akaenderera mberi achitaura nezve rangano nyowani, vatambi uye madingindira yenyaya iyi yechitatu: mazhinji uye akasiyana hukama hwemubereki nemwanala kusurukirwa muguta rakazara nevanhu iyo, zvisinei, inogona kuratidzwa isina chinhu ne kusava nehanya kune vamwe vakaita sevasina pekugara uye vasina pekugara. Kana, munzvimbo yekumaruwa, kurambwa uye kutya kune avo vanofungidzirwa zvakasiyana.
Akataurawo nezveavo zvinokuvaraidza ruzivo rwemunhu wega rwemunyori, senge rake verenga zvinonzwika zvaunonyora vateereri vepedyo kana vashoma vanopa maonero avo kana kutungamira kana kungoteerera. Uye mukupindura mubvunzo kubva kumutori wenhau, akataura kuti anogona nyora muchiGalician neSpanish, kunyanya dialogues. Uye sei ipapo anoenderera mberi nekukwenenzvera nekukwiridzira dudziro muchinyorwa chekupedzisira.
Uye zvechokwadi akataura nezvazvo kusetsa iyo iri zvakare mumanovel ake. Izvo Galician retranca iyo "vanotikanda patinozvarwa" uye chii zvakadaro brand brand. Kuseka kunopenya zvakanyanya kune izvo nyanzvi yekupokana pakati pezvose Mavara echiGalician uye asiri iye: Rafa Estevez.
Yaiva iyo kuvonga uye kufara kumhuri, shamwari, vapepeti uye vaverengi panguva ino yekumirira nekushivirira neiri roga basa remukati riri kunyora. Kutenda kwaive chikwereti nevapepeti uye, zvirokwazvo, nevose vanopinda.
Mune inozivikanwa signature Mushure mekupedza chiitiko, Villar akatipinda nemutsa wakashatiswa, newake "Ndatenda" kurumbidzo yangu, kuyemura nekutenda nekuda kwenyaya dzavo vaive kupedza kubata kune imwe yenguva dzekunyora idzo dzaunotokoshesa zvisaririra.
Chero ani anoziva Vigo kupfuura vagari vayo anenge aona izvo inotyisa yekugara shongwe yakasarudzika padivi pegungwa. Iko a saxophonist, aine maziso akajeka akachaidzwa louis reigosa, kuoneka akapondwa nehutsinye hunonongedza mhosva yekuda. Asi kwete hapana chinhu panzvimbo yematsotsi, pasina tsoka, hapana zviratidzo zvekurwa, kana chero hukama hwepamoyo hwekufungidzira.
Mune ino yechipiri novel yakanyanya kuwanda isu tine kuwanikwa kwe chitunha chemurume pamhenderekedzo yePanxón. Ndezve Just Castelo, UN mufambisi wechikepe uyo anoonekwa akasungwa maoko. Iko hakuna zvapupu uye hapana trace yeigwa remufi. Kunenge kuri kuongorora kwakaomarara nekuti munhu wese anonyaradza kufungira kwavo kana kuvadzora munzira dzakaomarara.
Kubva munyaya iyi a yakanaka yakanaka firimu kuchinjika mu2015 iyo yakaisa zviso kuna Caldas naEstévez mune yea Carmelo Gómez naAntonio Garrido.
Kunyangarika kwemusikana mudiki, Monica Andrademwanasikana wechiremba anovhiya ane mukurumbira anogara muTiran, padhuze neMoaña, anobatanidzwa Chakavanzika Kubva pakutanga. Ini ndakashanda mu Vigo Chikoro Chounyanzvi uye Crafts, akange asina chikonzero chiri pachena chekubva kana vavengi izvo zvaityisidzira. Kana pamwe hongu.
La kunyatsoongorora de Caldas y Estévez iri kutora matanho anoita kunge arasika mune chiuru mikana pamwe nemazita evose sevanofungidzirwa. Pamusoro pe, hupenyu hwega yemapurisa maviri ivo vanozove neshanduko zhinji izvo vaverengi vazhinji zvirokwazvo vakatotenda kare.
Kuti kana usati waverenga izvozvi, unofanirwa kutanga izvozvi. Yake yemhando yepamusoro uye kuverenga kwayo kunonoka syntax seyakasarudzika sezvazviri pachena. Zvakare kune avo zvitsauko zvipfupi uye inogara ichiziviswa neyakagadzirwa imba yacho zvinoreva zvakasiyana kweshoko chii chiri mavari.
Asi pamusoro pezvose nekuda kwesimba de kupinda munzvimbo yakapederana asi mhute uye nekubata mashiripiti iyo yandinogara ndichiwadzana nayo Galician terra. Uye pamusoro mavara hongu, vanova shamwari newe kubva panguva yawasangana navo, yeavo vaunogara uchifunga kuti ndinoshuva kuti dai vari vechokwadi nekuda kwechokwadi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Domingo Villar. Mharidzo muMadrid yeThe Last Boat. Yake trilogy
Kubvunzana naRicardo Alía, rimwe remazita makuru enhoroondo yekuparwa kwemhosva kuSpanish.